Payraise Calculator AJAX Version dị ugbu a! | Martech Zone
Payraise Calculator AJAX Version dị ugbu a!
Sunday, October 1, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Gị Payraise mgbako
Mara mgbe niile mgbe m na-apụ n'anya ụbọchị ole na ole - ọ pụtara na m na-a plentyụ ọtụtụ caffeine na mmemme ụbụrụ m. Otu n'ime ọrụ izizi m nwere bụ ịmebe ihe nchekwa data ndị ọrụ na Microsoft Access 2.0! Akụkụ nke m gbakwunyere na ya (ebe ọ bụ na ngalaba ọrụ ndị ọrụ nchịkwa anyị chọrọ ka e mejupụta ụkpụrụ niile) bụ ihe mgbako na-akwụ ụgwọ. Emere m ya dị ka ụdị na nchekwa data na nsonaazụ e bipụtara na akụkọ.
Ewuru m saịtị a site na ncha tinye n'ọrụ Dreamweaver (Abụ m ol 'ụlọ akwụkwọ notepad guy… mana m kpebiri inye ya ogbugba). Emere m eserese ahụ na onye na-ese ihe. Ejiri m CSS maka njedebe 100%, ma nwee ụdị mbipụta CSS (gaa n'ihu bipụta nsonaazụ ma ị ga-ahụ). N'ihu njedebe sitere n'ike mmụọ nsọ 37Signals… mara mma ma dị mfe, mana ọ mara mma. M ka nwere nsonaazụ na-egosipụta na tebụl - mana nke ahụ bụ maka ebum n'uche n'ihi na achọrọ m ka ndị mmadụ nwee ike idetuo na mado nsonaazụ na Excel ma ọ bụ pogram ọ bụla. Enwere otutu ihe ederede banyere ngwa ahụ. Enwere m olileanya na ọ masịrị gị!
Jide n'aka na ị kọọrọ m chinchi ọ bụla! Nzọụkwụ na-esote bụ ijikọta engine Search engine tinye n'ọrụ N'ezie maka njedebe-njedebe. Ikekwe izu ụka ọzọ!
Otu Ijeri Dollar maka Youtube? Enwere ike.